トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ How kuona kuburikidza Hottest nguva nepachinko yaiitirwa
Uye inopisa kana nguva mapazi iwe zvikuru sei nguva, ungave wakanzwa zvakanaka. Gobvu nguva mapazi, zvichienderana mamiriro ari nepachinko yaiitirwa ari nzvimbo uye operative chinzvimbo uye Sales, vachauya dzimwe musiyano iri kunze zvachose. In, nekuti ndinofunga kwete gobvu nguva mapazi handizivi, pano isu achasuma mukuru nepachinko yokumusoro kwerima nguva mapazi.
hobvu nguva mapazi, kureva, nepachinko parlors achange nguva mapazi kuti vangada kuti kuwedzera oparesheni. 'S tariro nguva mapazi kusvika zvakanakisisa vatengi. Saka, munguva yakadai nguva mapazi, iwe ungapinda wakasimwa chinhu parutivi nepachinko yokumusoro. Somuenzaniso, zvakanaka ona ndiyo nguva musiyano pakati hayo. Mune zvimwe zviitiko chete
1 wokuenzanisira, kumisa muzvizhinji kuti yokutevedzera, panewo nyaya akasvinura panguva musiyano. Uye sezvinoita 13 o'clock rakazaruka uye 18 o'clock rakavhurika womuenzaniso, ndinofunga kuti vamwe vanhu vakanga ndamboona ndivo zvakaziviswa. Chokwadi kuti ane nguva musiyano rakashama, ndiko kuti uchida kumhanya panguva iyoyo. Uye, ari muenzaniso kuti anova nangananga imwe nguva musiyano rakazaruka, kana Horukon kukwirira marongero ari kuisa motokari shoma kazhinji, tiri kana kuedza kuvhura pane dzose chipikiri kuchinja.
inoitawo kuyeva nguva musiyano rakavhurika, ndinofunga kuti ndiyo nzira yakanaka kuhwinha.
Uyezve, kana kwakadaro haisi nguva musiyano rakavhurika, sei kutaura nguva mapazi ndiyo inopisa kana kuti, zvikuru o'clock pm kubva munenge 3:00 pm 5 kana 6, uye gobvu nguva mapazi panguva pamusoro chinangwa vakasuwa kunyange imi. Nokufamba kwenguva ino mapazi, uye kuti nei gobvu nguva mapazi, vanhu vaiuya kuna Tomokazu ari, maita chinhu mubhizimisi kusvika.
Mukuwedzera, rapfuura zuva data, sezvo mashoko ane maawa mashoma zuva unogona kuonekwa, pane kuenda Tomokazu, Ndinomiririra kazhinji kusarudza. Kana ini ndanzwawo pechikuva iri watetepeswa, pane tinongoita yarova dzose tafura, zvichava zvinobetsera.
zvino pane mienzaniso kuti takashongedzerwa aine chinhu inonzi latency mukana kushanduka. Zviri maererano zvitoro, asi pasina erasing ari Isimba rakadini rinogona kubudiswa mukana kushanduka, ndicho kuti vangobvumira vakatakura pamusoro kusvikira mangwana. kwakadaro Pati Kana ukaona Nko chitoro, zvingaita kuti Tomokazu uyewo gobvu nguva mapazi.
Zvisinei, kuwana mukana uyu latency kushanduka, neniwo kufanana Miyabureru ari latency, nokuti anofanira kurangarira chidimbu, asi unotofanira kudzidza zvishoma, asi zvakadaro, kana ukaona kuti Tomokazu, chaicho mukana kushanduka riri zvemukati nokuti shanduro kuti imi muri, zvingava vapedzwa duku mubhizimisi anosvika kuzochera nokurova. Kana nguva iyi, kuti yakadai ndingangokuvara kuenda riri kumusoro, kwete nguva mapazi kuti anogona kusimbisa ndiye mamiriro chaiwo. Vose
nepachinko muchina, sezvo ROM chinotarisirwa, kana une kure kuzvidzora, zviri nokuti hazviiti zvitoro divi kutsausa. Zvisinei, zvichienderana nezviitiko kurutivi nguva mapazi uye zvitoro kuti akamutswa ambotaurwa, izvozvo anokanda zvirimwa kuchave zvakati watetepeswa. Chiitiko nguva, uye yakafanana munhu zvitoro uyewo ari reference, edza aiming nguva mapazi kuti anogona kuva zvakanaka inivhesitimendi.